Maamulka horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ku dhiirageliyay garsoorayaasha ciyaaraha habeenkii in ay kabtannada kooxaha kala hadlaan sidii ay ciyaartooyda Muslimka ah u affuri lahaayeen inta ay ciyaarta socoto, sida uu baahiyay Sky Sports.
26-kii April, kulan dhexmaray kooxaha Leicester iyo Crystal Palace ayaa muddo kooban la hakiyay si fursad ay ku affuraan ay u helaan laacibiinta kala ah Wesley Fofana iyo Cheikhou Kouyate oo labaduba soonnaa.
Goolhayaha Palace, Vicente Guaita ayaa muddo daqiiqad ka badan hakiyay kubad uu laadi lahaa, si labadaas laacib ay u affuraan kadibna ciyaarta u sii wataan. Labada kabtan ee kooxahaas ayaa arinkaa ku heshiiyay ka hor inta aanay ciyaarta billaaban.
Waxaa la rumaysan yahay in dhacdadaas ay ahayd tii ugu horreysay ee taariikhda kulan Premier League ah loo hakiyo si ay u affuraan ciyaartooy Muslimiin ah oo sooman bisha Ramadhaan.
Horyaalkaas ayaa waxaa ka ciyaara Muslimiin si wanaagsan diinta ugu dhaqma oo ay kamid yihiin Maxamed Salaax, Sadio Mané, Paul Pogba iyo kuwo kale.
Kooxda Manchester United ayaa barteeda Facebook ku qortay in laacibka Paul Pogba uu sonnaa kulankii ay la dheeshay Roma ee ay 6-2 uga badisay, isla markaana uu affuray ciyaarta oo socota.
Wesley Fofana ayaa ka mahadceliyay tallaabadaas, waxaana uu ku tilmaamay mid muujinaysa wanaaga kubadda cagta